Friday September 11, 2020 - 15:39:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xoogan oo duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland, kaas oo lala eegtay saraakiil katirsan maamulka uu hogaamiyo Axmad Madoobe.
ilo wareedyo Lagu kalsoon yahay ayaa Shabakada SomaliMeMo u xaqiijiyey in qaraxaas lagu dilay Shaafi Raabi Kaahin oo ahaa la taliyaha gaarka ah ee Axmad Madoobe, hogaamiyaha maamulka Jubaland, halka sidoo kale lala dilay qaar kamid ah ilaaladiisa.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyada qaraxan, iyadoo tibaaxday ina howlgal qorsheysan ku bartilmaameedsatay Shaafi Raabi oo kamid ahaa madaxda sarsare ee maamulka Jubaland.
Shaafi Raabi Kaahin ayaa ahaa la taliyaha gaarka ah iyo gacanta midig ee Axmad Madoobe, waxaana la xusuustaa inuu kaalin mugleh ka qaatay dib usoo doorashadii Axmad Madoobe oo sanadkii lasoo dhaafay markale loo doortay hogaamiyaha maamulka Jubaland.
Ninkan ayaa sidoo kale kamid ahaa aas-aasayaashii maamulka Jubaland sanadkii 2010, isagoo lahaa dadaalada ugu badan e lagu maalgeliyey laguna caleemo saaray Axmad Madoobe, halka sidoo kalena uu dhaqaale xoogan ku bixiyey shirarkii lagu qabtay dalka iyo dibadiisa ee sharciyada loogu raadinayey maamulkaasi.
Dadka aqoonta u leh shakhsiyada ninkan waxay sheegeen inuu dhawaan kaalin mugleh ka qaatay isu so dhaweynta maamulka Jubaland iyo xukuumada Imaaraatka Carabta, islamarkaana uu dhexdhexaadiye ka ahaa qandaraasyo iyo heshiisyo dhowr ah oo uu imaaraatka la saxiixday maamulka Axmad Madoobe intii lagu gudajiray khilaafkii khaliijka ee ay ku kala qeybsameen dowladaha carbeed ee galaangalka ku leh siyaasada Soomaaliya.
Inay Al-Shabaab ka takhalusto Shaafi Raabi Kaahin ayaa ka dhigan inay iska hor wareerjisay mid kamid ah mishiinada ama tiirarka uu ku taagnaa maamulka Jubaland, iyo gacantii midig ee uu ku tiirsanaa hogaamiyaha maamulkaas Axmad Madoobe.